नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी ए ७१ र ए ५१ को मूल्य कति?
नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी ए ७१ र ए ५१ को मूल्य कति? Samsung Galaxy A71 and A51 Price in Nepal
नेपाली पब्लिक मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ ०८:१९
काठमाडाैं– गत मार्च महिनामा सामसङले आफ्नो बहुप्रतिक्षित ग्यालेक्सी एस सिरिज अन्तर्गतका नयाँ स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको थियाे। सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी ए सेभेन्टीवान र ग्यालेक्सी ए फिफ्टीवान (Galaxy A71 and A51) सार्वजनिक गरेको हाे।
यी दुबै स्मार्टफाेन फाेटाेग्राफी तथा भिडियाेग्राफीकाे लागि उत्कृष्ट मानिएकाे छ। ग्यालेक्सी ए ७१ मा ६४ मेगापिक्सेल तथा ग्यालेक्सी ए ५१ मा ४८ मेगापिक्सेलको क्यामरा राखिएको छ। यसका साथै अल्ट्रा वाइड क्यामरामा १२३ डिग्रीको एङ्गल लेन्स पनि राखिएको छ। जसकारण यी स्मार्टफाेनहरूबाट खिचिएका फोटो तथा भिडियाेहरु सफा एवं उत्कृष्ट आउने कम्पनीले जनाएकाे छ।
साथै यी दुबै स्मार्टफाेनमा माइक्रो तथा डेप्थ सेन्सर समेत समावेश गरिएकाे छ। यसमा भएको म्याक्रो क्यामराले कुनै पनि वस्तुको फोटो सम्पूर्ण विवरण सहित खिच्न सकिन्छ। साथै डेप्थ क्यामराको लाइभ फोकस इफेक्टको मद्दतले फोटो तथा भिडियाे झन् राम्रो देखिने कम्पनीकाे दाबी छ। ग्यालेक्सी ए ७१ मा फुल एचडी प्लस (Full HD+ 1080×2400 pixels) रेज्योलुशनसँगै ६.७ इन्चकाे इनफिनिटी-ओ सुपर एमोलेड (Infinity-O Super AMOLED) डिस्प्ले रहेको छ।
यसैगरी ग्यालेक्सी ए५१ मा पनि फुल एचडी प्लस रेज्योलुशनसँगै ६.५ इन्चको डिस्प्ले समावेश रहेकाे छ। २५ वाटको फास्ट चार्जिङ सिस्टम रहेको ग्यालेक्सी ए ७१ मा ४५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ भने ग्यालेक्सी ए ५१ मा १५ वाटको फास्ट चार्जिङ सिस्टमकाे साथ ४००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ।
ग्यालेक्सी ए ७१ तथा ग्यालेक्सी ए ५१ प्रिज्म क्रश ब्ल्याक, ह्वाइट र ब्लू कलर अप्शनमा उपलब्ध रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। २९ फागुन देखि बजारमा उपलब्ध भएकाे ग्यालेक्सी ए सेभेन्टी वान र ग्यालेक्सी ए फिफ्टी वानको मूल्य कम्पनीले क्रमशः ४९ हजार ९ सय ९९ तथा ३८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ ताेकेर बिक्रि गर्दै आएकाे छ।
ग्यालेक्सी ए७१ र ग्यालेक्सी ए५१काे विशेषता:
#स्मार्टफोन #ग्यालेक्सी-ए७१ #ग्यालेक्सी-ए५१
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ ०८:१९